Global Voices teny Malagasy · 14 Septambra 2015
14 Septambra 2015
Tantara tamin'ny 14 Septambra 2015
Fandraisana mpialokaloka ao Frantsa : Halala-tanana sa ho feno fanahiana?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Septambra 2015
Samy manana ny fomba fandraisany ireo Syriana mpitsoaponenana ny manerana an'i Eoropa. Samy manana ny politikany ihany koa ny isam-pirenena na eo amin'ireo politisiana izany na eo amin'ireo fikambanana mpanampy an-tsitrapo.
Tonga ao Azia atsimo-atsinanana noho ny doro ala mamaivay ao Indonezia indray ny zavon-tsetroka
Azia Atsinanana14 Septambra 2015
Setroka avy amin'ny doro ala ao Indonezia no mitarika lanitra tsy hialan-javona ao Malayzia sy Singapaoro. Mamaly amin'ny alalan'ny ahiahy sy ny vazivazin'ilay "Mpihazakazaka Zavon-tsetroka" ireo mpiseraseran'ny media sosialy.
Miteraka Fironana Ao Arzantina Ny Fampakarambady Sandoka
Amerika Latina14 Septambra 2015
Amin'izao androntsika izao, vitsy ireo olon-droa manao fampakarambady any amin'ny faritra maro manerana ny tany, ary mba hanentsenana ny banga dia nampiditra ny atao hoe "fampakarambady sandoka" ny andianà Arzantina iray.